Sida Loo Fududeeyo Dabagalka Tooska ah ee Google Analytics UTM ee Salesforce Suuqgeynta Cloud | Martech Zone
Sida Loo Fududeeyo Dabagalka Tooska ah ee Google Analytics UTM ee Salesforce Suuqgeynta Cloud
Isniin, Janaayo 17, 2022 Arbacada, February 23, 2022 Douglas Karr
Sida caadiga ah, Salesforce Suuqgeynta Cloud (SFMC) laguma darin Google Analytics si loogu dhejiyo UTM raadinta doorsoomayaasha xargaha su'aalaha xiriir kasta. Dukumeentiga ku jira is dhexgalka Google Analytics ayaa caadi ahaan farta ku haya Google Analytics 360 is dhexgalka… waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tan eegto haddii aad runtii rabto inaad u qaadato falanqayntaada heerka xiga maadaama ay kuu ogolaanayso inaad ku xidho ka-qaybgalka goobta macaamiisha ee Analytics 360 warbixinnadaada Suuqgeynta Cloud.
Isku dhafka Ololaha Raadinta Google Analytics ee aasaasiga ah, in kastoo, way fududahay in si toos ah loogu dhejiyo mid kasta oo ka mid ah xuduudahaaga UTM xiriir kasta oo dibadda ka baxa ee ku jira iimaylka Cloud Suuqgeynta Salesforce. Asal ahaan waxaa jira 3 walxood:
Halbeegyada dabagalka isku xirka xisaabta oo dhan ee ku jira Dejinta Xisaabta.
Xuduudaha Xiriirinta Dheeraadka ah ee ku jira Email Builder oo aad si ikhtiyaari ah u habeyn karto cabbirrada UTM.
Raad-raac Links-ka waxa uu karti u yeeshay saaxir Direedka iimaylka.
Raadinta isku xirka Google Analytics ee Heerka Cutubka Ganacsiga SFMC
Waxaan isku dayaa inaan ka fogaado tillaabooyin dheeri ah waqtiga dirida sababtoo ah markaad sameyso olole, ma jirto dib u soo noqosho. Dirista ololaha iimaylka ka dibna lagu xasuusto inaadan awood u lahayn la socodka ololaha waa madax xanuun, sidaa darteed waxaan ku dhiirigelinayaa xuduudaha aasaasiga ah ee UTM in si toos ah loola socdo heerka akoontiga gudaha SFMC.
Si tan loo sameeyo, maamulaha akoonkaaga ayaa u wareegi doona Dejinta Koontadaada (doorasho ku taal dhanka sare ee midig ee hoos timaada magacaaga isticmaale):
U soco Dejinta> Maamulka> Maaraynta Xogta> Maaraynta Parameter
Taasi waxay furaysaa bogga dejinta halkaas oo aad ku habeyn karto Xiriiriyaha Falanqaynta Shabakadda
Sida caadiga ah, the xuduudaha ayaa la sameeyay sida soo socota ee dabagalka gudaha ee ololayaasha:
Taladaydu waa in tan loo cusboonaysiiyo:
FIIRO GAAR AH: Waxaan aragnay halka xargaha beddelka ay ku kala duwan yihiin macaamiisha. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku xaqiijiso xadhiggaaga taageerada Suuqgeynta Cloud. Iyo, dabcan, waa inaad u dirtaa liiska imtixaanka dhabta ah oo aad xaqiijiso in koodka UTM-ku ku lifaaqan yahay.
Tani waxay ku daraysaa kuwa soo socda:
ololaha ayaa loo qoondeeyay SFMC
utm_dhexdhexaad ayaa loo qoondeeyay Email
utm_murti waxaa loo dejiyay si firfircoon adiga Liiska Magaca
utm_content waxaa loo dejiyay si firfircoon adiga Magaca iimaylka
utm_term is ikhtiyaari ahaan u deji adigoo isticmaalaya sifada iimaylka dheeraadka ah ee ka timid email-dhisahaaga
Keydi dejimahaaga oo cabbirka ayaa lagu dhejin doonaa akoonkaas.
Cusbooneysiinta Sifadaada iimaylka Dheeraadka ah
Waxaan ka qariyay xogta heerka akoon ee shaashaddan, laakiin waxaad arki kartaa in hadda aan wax ka beddeli karo cabbirka sifada iimaylka dheeraadka ah si aan u dejiyo utm_term doorasho. Waxa laga yaabaa inaan u baahdo inaan tan u isticmaalo kala-soocida aasaasiga ah ee iimaylkayga sida upsell, iibinta isdhaafsiga, haynta, wararka, sida loo sameeyo, iwm.
Raad-raac Links-yada Markaad direyso SFMC
Marka la eego, Raad-raac Clicks waa karti marka la soo diro SFMC waxaanan ku talin lahaa waligaa ha joojin doorashadaas. Haddii aad sameyso, kaliya kama saarayso raadintaada UTM, waxay meesha ka saaraysaa dhammaan raadraaca ololaha gudaha ee loo soo diro Cloud Suuqgeynta.
Taasi waa tan… hadda laga bilaabo mar kasta oo emails lagu soo diro akoonkaas, waa ku habboon tahay Google Analytics UTM Dabagalka su'aalaha waxaa lagu lifaaqay si aad u aragto natiijooyinka suuq-geynta iimaylkaaga gudaha akoonkaaga Google Analytics.
Salesforce Suuqgeynta Cloud Caawinta: Maamul Halbeegyada
Haddii shirkaddaadu u baahan tahay hirgelinta ama kaalmaynta isdhexgalka ee Salesforce Suuqgeynta Cloud (ama adeegyada kale ee Salesforce la xiriira), fadlan ka codso caawimaad iyada oo loo marayo Highbridge. Shaacinta: Waxaan ahay lammaane Highbridge.
Tags: __Imayl Dheeraad ah sifada1Magaca iimaylka_Analytics googlesida looMagaca LinkigaLiiska Magacamaaraynta halbeeggasaleforce marketing Cloudsfmclinks trackxuduudaha utmololahautm_contentutm_dhexdhexaadutm_murtiutm_termxiriiriyaha falanqaynta webka
SlayerAI: Go'aaminta kelmado kala duwan oo badan oo aad u baahan tahay inaad ku guulaysato